ब्रह्माण्डमा मानवको अस्तित्व | काव्यालय
ब्रह्माण्डमा मानवको अस्तित्व | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by रमेश भण्डारी May 9, 2020
लकडाउन र भोक प्यासले देश नै आक्रान्त भइरहेको घडिमा पनि ऊ मस्त जिन्दगी बिताउँदै थियो, अथवा जबरजस्त बाँचेजस्तो अभिनय गरिरहेको थियो ! बाहिरबाट झट्ट हेरेर कसैको भित्री हृदयमा कसरी पो पुग्न सकिन्थ्यो र ? साहित्यमा औधी रुचि राख्ने ऊ, यथार्थपरक कविताहरु कोर्ने गर्दथ्यो । उसका कविताहरुमा हरकोहीले आफूलाई पाउँथे, उसका दमदार शब्दहरुमा भोका र नाङ्गाहरुको बुलंद आवाज र चिच्चाहट सुन्न सकिन्थ्यो । हरेक विसंगती र विकृति विरुद्ध साहित्यको माध्यमबाट ऊ निरन्तर चोटिलो प्रहार गरिरहन्थ्यो।
“सुन् न, मलाई एउटा नयाँ लेखको आइडिया आएको छ । मैले प्लटपनि तयार पारेको छु, पढ्छ्स ?” अचानक फेसबुकमा उसको म्यासेज झुल्कियो। (एउटै कलेज पढेको हुनाले हामी एक अर्कालाई “तँ” ले नै सम्बोधन गर्दथ्यौँ । )
“अवश्य नै, त्यो पनि सोध्ने कुरा हो र ?” (म आतुर थिएँ ।)
उसले एउटा लामो लेख पठाउँदै भन्यो, “ल पढ है !”
“केटा, यो त तयार छ त ! तेरा शब्द सापटी लिने हो भने, उल्का छ यो लेख पनि ! अँ साँच्चै, यसलाई प्लट होइन ड्राफ्ट भनिन्छ है !” एक फाँको मुस्कानको इमोजी टाँसेर उसलाई भन्छु, “त्यो सपनावाला कुरा चाहिँ गज्जब लाग्यो पुरै लेखभरिमा ।”
“हसाँइस तैँलेपनि…. त्यो गज्जब होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो एक अदृश्य सत्य भने हो । के तँलाई लाग्दैन र, हामी सबै कसैको सपनाको पात्र हौँ ? उसले तयार पारिदिएको रंगमञ्चमा हामी आफ्ना-आफ्ना भुमिका देखाउन बाध्य छौँ अनि सपनामै हाम्रो नौटंकी हेरेर ऊ रमाइरहेको छ । जुन दिन ऊ सपनाबाट ब्यूँझने छ, न उसको रंगमञ्च रहने छ न त हामी नै । ऊ विपनामा आउँदा हाम्रो अस्तित्वको समापन हुनेछ।”
“हो, यिनै कुराहरुलाई मात्र आधार बनाएर अर्को लेख पनि तयार पार न त ! तेरा लेखहरु पढ्दा मजा आउँछ ।”
“तँलाई थाहा नै छ नि, म खासै लेखहरु लेख्दिनँ । योपनि कसरी पो लेखेँ ! यो लेख भने प्रकाशित पक्कै गर्छु नै, जसले मेरो लेख पढ्छ अनि मेरो जस्तै सोच्छ उसले त्यो विषयमा उठान गर्ने जमर्को पक्कै गर्नेछ ।”
“अरु भन्, दिन कसरी काटिरहेछ्स त आजभोलि ?”
“दिन काट्नु ठूलो कुरा नै होइन न त नौलो नै ! जिन्दगी भन्नु नै के हो र ? आखिर यो माटोबाट सापट लिएर भोलि माटोमै बुझाउने शरीरको पनि के मोह ? हामी त फगत एक चक्रमा घुमिरहेका छौँ, जसको यथार्थमा कुनै अस्तित्व नै छैन । हामी सबै भ्रमरुपी जञ्जालमा रुमल्लिरहेका छौँ । तँ आफै भन् न मलाई ! यो मोहरुपी संसारमा, भौतिकतामा रमाउने ब्रह्माण्डमा सिङ्गो मानवजातीको के अस्तित्व छ ?”
“म अवाक छु, तेरो यो दार्शनिक कुराहरुबाट । बडो गम्भीर कुराको उठान गरिस् यार । तँ मस्त बाँच्ने मात्र होइन मस्त सोच्नेपनि भइछ्स् आजभोलि ।”
“आकाशमा चम्किने तारालाई हेरेस कहिलेकाहीँ, हामी त्यही ताराको एउटा सानो अंश मात्र हौं । तारा ग्यासबाट बन्छ, अनि त्यो ग्यास प्रकृतिमा सर्वव्यापी पाइन्छ । अर्थात, यो संसारमा कसैको पनि कुनै पुरुष, कुनै महिला या अरु सजीवताको खोल ओढाइएका चिजहरुको कुनै पनि प्रकारको अस्तित्व छैन । प्रकृति नै अजर र अमर छ अनि यो अस्तित्वविहिन सापटी लिएको जिन्दगीमा बाँच्ने नै मस्त भएर त हो । ल, म गएको अहिले, बोल्दै गरौँला ।”
उसका ती दार्शनिक र मनोवैज्ञानिक कुराहरुले धेरैबेरसम्म मलाई कता-कता चिमोटिरह्यो । के हामी यत्रो ठूलो ब्रह्माण्डमा मानिएका मात्र हौँ त ? यहि प्रश्नले मलाई सताइरह्यो अनि पछयाइरह्यो । सोचहरुको एउटा बेग्लै भवसागरमा पुगेर डुबुल्की मार्दा म आफैलाई पनि उसका कुराहरुमा यकिन लाग्न थाल्यो । प्रकृतिमा जति नै सजीव र निर्जीव चिजहरु छ्न् ती सबैको उत्पादन वा उत्पत्तिको मुल आधार एउटै हो, सायद ती चम्किरहने ग्यासबाट बनेका ताराहरुको एउटा अंश नै पो हुन कि यी सबै वस्तुहरु । सजिव चिजहरु जस्तै कुनै जनावर त्यसलाई हामीले जलायौँ भने त्यो खरानीमा परिणत हुन्छ, मानिस नै किन नहोस् या सजिव मानिएका रुखहरु नै किन नहुन् ती सबै परिणत हुने आखिर खरानीमै त हुन् । त्यसैगरी निर्जीव चिजहरु जस्तै कुनै घर, टेबल, किताब या माटो नै किन नहोस् जलाउन सकियो भने ती सबै परिणत हुने खरानीमै होइनन् र ? भलै, मानिसको खरानी, घरको खरानी, किताबको खरानी या माटोको खरानी केही फरक देखिएलान् तर सबैको अन्तिम गन्तव्य वा नतिजा त खरानी नै हो नि ।
यदि नतिजा सबैको एउटै र उही नै भए उत्पादन वा उत्पत्तिको स्रोत पनि एउटै हुनुपर्छ, होइन र ?
वास्तवमै प्रकृति भन्दा ठूलो के नै पो छ र ? जति नै वैज्ञानिक युगमा नै किन नपुगौँ हामी, कहिले बर्डफ्लु त कहिले स्वाइनफ्लु, कहिले हैजा त कहिले झाडापखाला, कहिले इबोला त कहिले कोरोना भाइरस ! के बारम्बार प्रकृतिले हाम्रो भौतिक मोह र वैज्ञानिक आविस्कारको दम्भ तोडेको छैन र ? मोह; कसैलाई पदको, कसैलाई कुर्सीको, कसैलाई पैसाको, कसैलाई रुपको, कसैलाई साहित्यको, कसैलाई संगीतको, मृत्युले सबैलाई न्याय गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै कसैलाई जीवनको ! आखिर किन हामी यति आसक्त र सांसारिक सुख-सयलको मोहमा लिप्त भएका छौँ ? किन हामीले खोज्न चाहेनौँ यहाँ आफ्नो अस्तित्व ?
सदियौं पहिले डाइनोसर नामक जनावरको अस्तित्व हराए जसरी मनुष्य जातीको अस्तित्व पनि धरापमा पर्ने त होइन ! तर यहाँ मतलब नै कसलाई छ र ? हामीलाई आफ्नो अस्तित्व विलीन हुन्छ भन्ने डर नै छैन ! यो मान्न पनि कोहि तयार छैन कि एउटा भ्रमरुपि जञ्जालका हामी फगत अभिनेता हौँ । यो ब्रह्माण्ड त केवल मानिएको मात्र हो भनेर पनि हामी मान्न सक्दैनौँ । यहाँ न केही कसैको छ, न त कोही कसैको । मानिसैपिच्छे हामी हाम्रो स्वभावबाट पर हटेर बेग्ला बेग्लै स्वरुप देखाइरहेका छौँ ता कि हरेकलाई लागोस् ऊ अरुभन्दा केही फरक र धेरै जान्ने-बुझ्ने छ । यो ब्रह्माण्डमा हामी एउटा नाटक मञ्चन गरिरहेका छौँ जहाँ पात्र अनुरुप हामी हाम्रो भुमिका फेरिरहेका या भनौँ निभाइरहेका छौँ । हिजो पनि यसरी नै चलिरहेको थियो, आज पनि त्यही चलिरहेछ फरक यति मात्र हो कि केही मानिसहरुको अध्याय समाप्त भयो त केहीको श्री गणेश !
जसरी गणितीय हिसाबहरु गर्दा हामीलाई सिकाइन्थ्यो मानौँ (सपोज) X भनेको यो हो, त्यसबाट हिसाब गरेर हामीले X को मान\_मुल्य (भ्यालु) पत्ता लगाउथ्यौँ । केही निश्चित समयसम्म अर्थात त्यो हिसाबभरि X को मान त्यहि रहन्थ्यो तर जब हामी अर्को हिसाब गर्थ्यौँ फेरि त्यहि प्रक्रिया दोहोरिन्थ्यो ! फेरि X को नयाँ मान निस्किन्थ्यो । के त्यस्तै होइन र मनुष्यको लीला पनि ? जसरी कुनै हिसाबमा X को मानले केही समयसम्म काम गर्छ त्यसै अनुरूप मानिसको जिन्दगीले पनि केही समयसम्म काम गरिरहेको छ । त्यो केही समय ( X को मान) भनेको जति पनि हुनसक्छ, १० वर्ष, ४० वर्ष, ६० वर्ष वा १०० वर्ष । जब त्यो मानिस X को मानसम्म पुग्छ उसको अध्याय समाप्त हुन्छ, त्यसैगरी यो प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
हामी सबैको एउटा निश्चित मान निकालिएको छ, जब हामी त्यो मानसम्म पुग्छौँ हाम्रो लीला सकिन्छ । त्यो मान निकाल्ने या मान्ने कोही छ, त्यहि हो सृष्टिकर्ता ।
हामी भगवान हुन्छ मानेर पुज्छौँ नि, जसलाई कसैले पनि देखेको हुँदैन । सायद हाम्रो मान निकालेर हामीलाई यहाँ नाटक मञ्चन गराउने उही नै पो हो कि ? या अरु कोहि नै छ ! जुन दिन उसले मान्न (सपोज गर्न) छोड्ने छ त्यसदिन यो ब्रह्माण्डमा मानवको अस्तित्व सकिने छ । यहाँ युगहरु (सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग अनि कलियुग) त कुनै निश्चित समयपछि सकिए\_सकिन्छ्न् भने हामी मानव को हौँ र अजर अमर रहिरहन् ? अझ अनौठो कुरा के छ भने, प्रत्येक युगहरुमा मानवको आयु घटिरहेको छ, सत्ययुगमा औसत १,००,००० वर्ष आयु हुन्थ्यो भने अहिले १०० वर्षमा पुगेको छ, यसबाट झनै प्रष्ट छ हाम्रो अस्तित्व एकदमै चाँडो लोप हुनेवाला छ।
हामीसँग इतिहासपनि साक्षी छ, जसरी डोडो, तसमानिएन टाइगर, डाइनोसर लोप भए त्यसैगरी हामी पनि एकदिन लोप हुनेछौँ । यो ब्रह्माण्डमा हामी सबै मानिएका मात्र हौँ, के हजुरहरुलाई त्यस्तो लाग्दैन र ?